ပစ္စည်းအမျိုးအစား ငါးသောင်းကျော်ကို ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးမယ့် “11.11 The World’s Biggest Sale Day”
ပစ္စည်းအမျိုးအစား ငါးသောင်းကျော်ကို အများဆုံး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးမယ့် “11.11 The World’s Biggest Sale Day”
5 Nov 2018 . 6:02 PM
SHOP က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော် “11.11 The World’s Biggest Sale Day” ကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ငါးသောင်း (၅၀,၀၀၀) ကျော်ကို ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လူသုံးကုန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဖက်ရှင်ပစ္စည်း၊ ကလေးအသုံး အဆောင်ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်း၊ အလှအပဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ အားကစားပစ္စည်းတွေကို ၉ဝရာခိုင်နှုန်းအထိ အများဆုံးလျော့ဈေးနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဈေးပွဲတော်နေ့မှာ ၀ယ်ယူတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက်အထိ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
အများဆုံး ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးမယ့်အပြင် Mega Deal ၊ Mystery Box ၊ Crazy Flash Sales ၊ Crazy Voucher စတဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေလည်း ပါဝင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ဈေးဝယ်သူတွေက ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို SHOP App ကနေ ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလည်း လျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Alibaba ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီး “11.11 The World’s Biggest Sale Day” ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ www.shop.com.mm မှာ နိုဝင်ဘလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ စတင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ SHOP App https://bit.ly/2Ni97bT ကို Android နှင့် iOS ဖုန်းတွေမှာလည်း Download ဆွဲပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဈေးဝယ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုရယူလိုက်ပါ။
Mega Deal ဆိုတာ အကောင်းဆုံး Deal Selection တွေကို သီးသန့်ရွေးချယ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mega Deal တွေကိုတော့ ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ပြီး ရောင်းချပေးမှာပါ။
Gift Voucher ဆိုတာ အများဆုံး ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ဈေးအပြင် အပိုလျှော့ဈေးတွေလည်း ထပ်ဆောင်းရရှိနိုင်မယ့် အထူးလျှော့ဈေး Gift Voucher တွေကို SHOP App မှာ လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဘောက်ချာအရေအတွက်တော့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Crazy Flash Sale ဆိုတာ အမြင့်ဆုံးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အရေအတွက်ကန့်သတ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရောင်းချပေးမှာမို့ မြန်မြန်ဝယ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
Mystery Box ဆိုတာ SHOP ကနေ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုသာ ပြောပြထားမှာဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲပုံး လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲမှာ ရရှိမယ့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုတော့ ဈေးဝယ်သူဘက်ကနေ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ရမယ့် ကံစမ်းမဲပုံး Mystery Box ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ . . . ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင် လျော့ဈေးရမယ့် ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ SHOP App ကို Download လုပ်ကြရအောင်နော်။
ပစ်စညျးအမြိုးအစား ငါးသောငျးကြျောကို အမြားဆုံး ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့ဈေးတှနေဲ့ ရောငျးခပြေးမယျ့ “11.11 The World’s Biggest Sale Day”
SHOP က မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အကွီးမားဆုံးအှနျလိုငျးဈေးရောငျးပှဲတျော “11.11 The World’s Biggest Sale Day” ကို နိုဝငျဘာလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာ ရောငျးခပြေးမှာဖွဈပါတယျ။ ပစ်စညျးအမြိုးအစားပေါငျး ငါးသောငျး (၅၀,၀၀၀) ကြျောကို ဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပွီး လူသုံးကုနျလြှပျစဈပစ်စညျး၊ ဖကျရှငျပစ်စညျး၊ ကလေးအသုံး အဆောငျပစ်စညျး၊ အိမျသုံးပစ်စညျး၊ နာမညျကွီး အမှတျတံဆိပျပစ်စညျး၊ အလှအပဆိုငျရာပစ်စညျးတှနေဲ့ အားကစားပစ်စညျးတှကေို ၉ဝရာခိုငျနှုနျးအထိ အမြားဆုံးလြော့ဈေးနဲ့ ဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပွီး ဈေးပှဲတျောနမှေ့ာ ဝယျယူတဲ့ကုနျပစ်စညျးတှကေို အိမျတိုငျရာရောကျအထိ အခမဲ့ပို့ဆောငျပေးသှားမှာပါ။
အမြားဆုံး ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျး လြှော့ဈေးနဲ့ ရောငျးခပြေးမယျ့အပွငျ Mega Deal ၊ Mystery Box ၊ Crazy Flash Sales ၊ Crazy Voucher စတဲ့အထူးပရိုမိုးရှငျးတှလေညျး ပါဝငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ နိုဝငျဘာလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာ ဈေးဝယျသူတှကေ ပစ်စညျးအမြိုးအစားပေါငျးမြားစှာကို SHOP App ကနေ ဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နာမညျကွီးဖုနျးအမှတျတံဆိပျနဲ့ ဖကျရှငျအမှတျတံဆိပျတှကေိုလညျး လြှော့ဈေးတှနေဲ့ ရောငျးခပြေးမှာဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ပထမဦးဆုံးကငျြးပပွုလုပျမယျ့ Alibaba ရဲ့ အကွီးမားဆုံးအှနျလိုငျးဈေးရောငျးပှဲတျောကွီး “11.11 The World’s Biggest Sale Day” ကိုပါဝငျဆငျနှဲနိုငျဖို့ www.shop.com.mm မှာ နိုဝငျဘလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာ စတငျဝငျရောကျကွညျ့ရှုဝယျယူနိုငျပါပွီ။ SHOP App https://bit.ly/2Ni97bT ကို Android နှငျ့ iOS ဖုနျးတှမှောလညျး Download ဆှဲပွီး ပြျောရှငျဖှယျရာ ဈေးဝယျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေိုရယူလိုကျပါ။
Mega Deal ဆိုတာ အကောငျးဆုံး Deal Selection တှကေို သီးသနျ့ရှေးခယျြပေးထားမှာဖွဈပါတယျ။ Mega Deal တှကေိုတော့ ပစ်စညျးအရအေတှကျ ကနျ့သတျပွီး ရောငျးခပြေးမှာပါ။
Gift Voucher ဆိုတာ အမြားဆုံး ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့ဈေးအပွငျ အပိုလြှော့ဈေးတှလေညျး ထပျဆောငျးရရှိနိုငျမယျ့ အထူးလြှော့ဈေး Gift Voucher တှကေို SHOP App မှာ လကျဆောငျ ရယူနိုငျပါတယျ။ ဘောကျခြာအရအေတှကျတော့ ကနျ့သတျထားပါတယျ။
Crazy Flash Sale ဆိုတာ အမွငျ့ဆုံးလြှော့ဈေးတှနေဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အရအေတှကျကနျ့သတျပွီး အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ရောငျးခပြေးမှာမို့ မွနျမွနျဝယျဖို့တော့လိုပါတယျ။
Mystery Box ဆိုတာ SHOP ကနေ နာမညျကွီး အမှတျတံဆိပျတှကေိုသာ ပွောပွထားမှာဖွဈပွီး ကံစမျးမဲပုံး လုပျပေးထားမှာဖွဈပါတယျ။ ထိုအမှတျတံဆိပျတှထေဲမှာ ရရှိမယျ့ ပစ်စညျးအမြိုးအစားကိုတော့ ဈေးဝယျသူဘကျကနေ ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့မြှျောရမယျ့ ကံစမျးမဲပုံး Mystery Box ပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ . . . ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးအထိတောငျ လြော့ဈေးရမယျ့ ပစ်စညျးတှကေို ဝယျယူနိုငျဖို့ SHOP App ကို Download လုပျကွရအောငျနျော။